क कस्ले खाँदैछन मन्त्रीको सपथ ? – YesKathmandu.com
बिहीबार २०, साउन २०७३
नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अहिले केही क्षण पछाडि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बाट पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गर्दैछन । उक्त शपथ ग्रहण शितल निवासमा हुँदैछ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पद तथा गोपनीयताको शपथसँगै नेपाली काँग्रेसबाट तीन मन्त्रीले शपथ लिने टुङ्गो लागेको थियो । शेरबहादुर देउवाका दाहिने हात मानिएका विमलेन्द्र नीधिको नेतृत्वमा कांग्रेसले अरु मन्त्रीहरु पठाउने भएसँगै आफू भन्दा जुनियरको नेतृत्वमा मन्त्री नबन्ने बताँउदै अर्जुन नरसिंह केसीले सपथ नखाएका हुन ।
निधिले गृह, एवम् रमेश लेखकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सम्हाल्नु हुनेछ ।गृहमन्त्री नपाएको भन्दै नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसी सपथ लिन गएनन् ।प्रचण्ड सरकारमा कांग्रेसले पहिलो चरणमा पठाएको तीन मन्त्रीमा केसीको पनि नाम थियो । उनको मन्त्रालय भने तोकिएको थिएन ।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले उनलाई रक्षा वा स्वास्थ्य मध्ये एक रोज्न भनेका थिए । तर, केसीले गृह नपाएसम्म सरकारमा नजाने जवाफ दिएका थिए ।
त्यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का तर्फबाट प्रधानमन्त्रीसँगै कृष्णबहादुर महरा, जनार्दन शर्मा लगायतले शपथ लिने बुझिएको छ । महरा अर्थ,जनार्दन शर्मालाई सञ्चार मन्त्रालयको टुंगो लागेको माओवादी स्रोतले जनाएको छ । यी सँगै गौरी शंकर चौधरी,दलजीत बिके श्रीपाली लगायत मन्त्री बन्ने टुंगो लागेको माओवादी स्रोतले जनाएको छ । गौरीशंकर कृषि र दलजित युवा तथा खेलुकद मन्त्री हुने छन् ।
यस्तै कानुन मन्त्रालय माओवादीकै भागमा परेको अवस्थामा रामनारायण विडारीको भाग्य बल्ने सभ्भावना देखिएको छ ।
काँग्रेस र माओवादी केन्द्रलगायतका दलको समर्थनमा बनेको दाहाल नेतृत्वको सरकारमा काँग्रेसले १३ र माओवादी केन्द्रले आठ मन्त्रालय पाउने सहमति भएको छ ।
एमाले–माओवादी एकीकरणपछि बन्ने भए बृद्ध कम्यूनिष्ट मञ्चदेखि १० कमिटी !
कमल थापालाई खुल्ला प्रश्न ‘राजतन्त्रबादीले गणतान्त्रिक संविधानको रक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?’
तेस्रो लिङ्गी भुमिकाले नागरिकता पाइन